March 2015 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
ဓာတ်ပုံကို ကောင်းဆုံးရိုက်ကူနိုင်တဲ့-HD Camera Pro v1.6.0 Apk
Win Hlaing at 7:54:00 PM 0
ဒီဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ HD Camera Proကတော့ အခုနောက်လူသုံးများလာသော Camera တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီHD Camera Proကတော့ဗျာ တကေကောင်းပါတယ် Factuers တွေများနေတယ်ဆိုတော့ ပိုကောင်းတာပေ့ါဗျာ အရုပ်တွေဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး ဒီHD Camera Proနဲ့ရိုက်လိုက်မယ်ဆို၇င် ချစ်သူတွေ
ကြွေသွားနိုင်တယ်ဗျာ။ ဒါ့အပြင် Camera ပိုင်း ၊ ဓါတ်ပုံပြုပြင်မှုပိုင်းတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Feature ပေါင်း 23မျိုးတိတိပါဝင်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီ ကိုတော့အောက်မှာရေးပြထားပါတယ်ဗျာ။မယုံဘူးဆို၇င်
အပြောနှင့်လက်တွေကျစေချင်းရင် အောက်ကlink မှာဒေါင်းပြီးမှမိမိဖုန်းတွေမှာ install
လုပ်ပြီးအသုံးပြုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လက်တွေကျတယ်။ Android OS 3.2 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ် ပါတယ်ဗျာ။
Mobile Counter Pro – 3G, WIFI v3.8 Apk
Win Hlaing at 12:04:00 AM 0
Phone တွေအတွက်မဆောင်မဖြစ်ဆောင်ထားရမယ် Android apk ပေးပါသူငယ်ချင်းတို့ရယ်။အများအားဖြင့်အထူသတိပေးချင်းတာကာတော့ဖုန်းအင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ။ မိမိဖုန်းက အင်တာနက်ဖွင့်လိုက်ချိန်ကစပြီး အင်တာနက် data usage ဘယ်လောက်သုံးစွဲထားတယ်ဆိုတာကိုအသေးစိတ် ပြသနိုင်တဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ။ GSM/CDMA/WCDMA အင်တာနက်အကုန်လုံးအတွက်ဒီVersion 3.8APKအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒီကောင်းလေး၏ ဖိုင်းဆိုဒ်လေးကတော့ 1.36 MB ပဲရှိပါတယ်ဗျာ။
ဖုန်းထဲမှာ Video Edit & Create ပြုလုပ်ပေးနိုင်မယ်-VivaVideo Pro: Video Editor v4.1.0 Apk
Win Hlaing at 2:31:00 PM 0
Android ဖုန်းကိုင်းဆောင်ထားတယ်ဘော်ဒါတွေအတွက်မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ video လေးတွေကိုအကောင်းဆုံး တည်းဖြတ်ပေးနိူင်မယ့် VivaVideo Pro: Video Editor v4.1.0apk ဗားရှမ်သစ်လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။video တွေကိုမိမိလိုသလိုအလွယ်တကူတည်းဖြတ်နိူင်ပြီး မိမိကြိုက်တဲ့ video တွေထဲက မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အခန်းလေးတွေကို ဓာတ်ပုံတွေအဖြစ်နဲ့ပါထုတ်နိူင်ပြီး video တွေကိုလဲ mp3 သီချင်းတွေဖြစ်တဲ့ audio တွေအဖြစ်သို့ပြောင်းထုတ်နိူင်ပါသေးတယ် ။ ရီစရာဟာသ Video လေးအဖြစ်လည်း ဓါတ်ပုံများ Video များကိုဖန်တီးပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ မိမိကြိုက်တဲ့ effect လှလှလေးတွေနဲ့အလန်းစားလေး ပြင်နိူင်သလို subtitles အနေနဲ့စာတန်းလေးတွေပါထည့်ထိုးနိူင်ပါတယ် ဒါ့အပြင်ဓာတ်ပုံတွေသီချင်းတွေနဲ့ ဖန်တီးယူနိူင်သလိုလိုင်းထဲကိုလဲတခါတည်းရှယ်နိူင်ပါတယ် ။ Feature အသေးစိတ်ကိုတော့ အောက်မှာရေးပြထားပါတယ်ဗျာ။ Application လေးရဲ့ပုံစံကိုကြည့်နိုင်ဖို့ Screen တွေ ကိုအောက်မှရိုက်ပြထားပါတယ်ဗျာ။ဒီကောင်လေး၏ဖိုင်းဆိုဒ်လေးကတော့32.46MB ဖြစ်ပြီး Android OS 2.3.3 အထက်ရှိဖုန်းများသုံးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
ဖုန်းနှင့် လုပ်စားနေတဲ့သူများအတွက်ရှိသင်တိုက်တဲ့-Root Checker Pro v1.4.8 apk
Win Hlaing at 12:23:00 PM 0
Samsung Galaxy Y S5360 ကို လွယ်ကူစွာ ဘယ်လိုRootဖောက်မလဲနှင့် မြန်မာစာထည့်နည်း
Win Hlaing at 11:49:00 AM 0
Samsung Galaxy Y S5360 ဆိုတဲ့ ဒီကောင်းလေးကိုအကောင်းဆုံး အလွယ်ကူဆုံး Root ကြမယ်ဗျာ။
zipကိုရယူပြီးပါက ပြီးပါကSettings -> Applications -> Development-> Enable USB Debugging Modeမှာအမှန်ခြစ်ပေးပါ။
အခုပေးထားတာထည့်မှာ Enable USB Debugging မရှိပါက ဘယ်လို့ယူရမှာလဲဆိုတာ ဒီနေ့ရာသွားကြည့်လိုက်ပါဗျာ။
SD Card or Memory Card တခုခုထဲသို့မိမိတို့ ရရှိထားတဲ့ Zipဖိုင်းလေးကိုထည့်ပေးပါထည့်ပြီးသွားပါက Power Button ကိုနှိပ်ပါ မိမိဖုန်းနဲ့PC ကိုUSB Cableချိပ်စပ်ထားပါ Recovery Mode၀င်အောင်Press Volume UP Button,Home Button and Power Button
ဖိနှိပ်ပါ 15-20 Secondsလောက် Recovery Mode၀င်သွားတော့မှ လွတ်လိုက်ပါမိမိက SD Cardထဲမှာထည့်သွင်းထားတယ်ဆိုပါဆို Apply Sdcard;ch------ဆိုတဲ့ စာတန်းပေါ်သို Home Key Button့ နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါ ပြီးပါက Update ZIP Fileကိုရှာပြီး
Update ZIP File ကို ထည့်သွင်းပေးလိုက်ပါ 15-20 Minutesလောက်ကြာပါမယ်Automatically(အလိုလျှောက်)လုပ်ဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်လုပ်ဆောင်ပြီးပြန်တတ်လာရင် Rootရရှိသွားပါပြီး
မြန်မာစာထည့်၇န်အတွက်တော့ ပထမဆုံးတော့ မြန်မာကီးဘုတ်ကိုဒေါင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် ကီးဘုတ်ဒေါင်း၇န်တော့ ဒီမှာနှိပ်ပါ။
ဘော်ဒါတို့အနေနဲ့မြန်မာစာကိုထည့်လို့ပါက မြန်မာစာမြင်နိုင်အတွက် မြန်မာဖောင့်ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာစာတော့ထည့်လို့ပါက ဒီနေ့ရာ ကသွားယူလိုက်ပါ။
ဒေါင်းထားပြီး ကီးဘုတ် မြန်မာဖောင့်တွေကို install လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တကေလို့များZawgyi လိုကောင်းကောင်းမမြင်းရဘူးဆို၇င် ဒီကောင်း ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီးနော်။
Advanced Task Manager - Boost v5.1.9 apk
Win Hlaing at 10:21:00 PM 0
ဖုန်းကိုင်းဆောင်ထားတယ်သူတွေအတွက် မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Advanced Task Manager Pro (Full version) version အသစ်v5.1.9 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖုန်းတွေမှာဆော့ဝဲတွေသွင်းတာများလာရင် သုံးလာများလာရင် စက်ကသုံးရတာနှေးလာတတ်ပါတယ်။
နားကြပ်နဲ့နားထောင်ရင်သီချင်းပိုမိုကောင်းစေမယ့် -Bass Booster Pro v1.0 apk
Win Hlaing at 9:57:00 PM 0
ဖုန်းကိုင်းထားပြီး သီချင်းနာထောင်ရတာဝါသနာပါသော ဘော်ဒါတွေ အတွက် Bass Booster updater version လေးကိုတင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးကတော့နားကြပ်နဲ့ နားထောင်းမယ်ဆိုရင်တော့တီးလုံးသံများသီချင်းသံများကိုပိုပြီး ကောင်းစေပြီး အရသာရှိစေမယ် Application လေးတစ်ခုအဖြစ်ဆောင် ရွက်နိုင်စွမ်းရှိတယ် Playerတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုတကယ့်ကိုအရသာရှိရှိနဲ့နားထောင်နိုင်မှာပါ။ sound Systemကိုအသေးစိတ် ချိန်ညှိပေးနိုင်တဲ့ Feature တွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်ဗျာ။ ကိုယ်တိုင်သာကလိကြည့်ကြပါ။ တွဲဖက်နားထောင်လို့ရမယ့် Player List ကိုအောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
USB Transfer Size ကို 64 kb ကနေ2MB အထိ မြှင့်ပြီး သုံးရအောင်
Unknown at 5:30:00 PM 0
ကျွန်တော် အခုပြောမဲ့ နည်းလမ်းလေးကတော့ ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာမှာ USB Stick ကိုအသုံးပြုပြီး File တွေကို ကူးတဲ့ အခါမှာ အရင်ရှိပြီးသား File Transfer value က 64 kb ပဲ ရှိပါတယ် .. အဲ့ဒါကို ကျွန်တော်တို့က2MB အထိမြှင့်ပြီး အသုံးပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ် .. File Transfer value မြှင့်လာတော့ မိမိတို့ ကွန်ပျူတာထဲကနေ USB Stick ကို File တွေကူးတာပဲဖြစ်ဖြစ် USB Stick ထဲကနေ ကွန်ပျူတာထဲကို File တွေ ကူးတာပဲဖြစ်ဖြစ် ပိုပြီးတော့ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် .. ကျွန်တော် အောက်မှာ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ် ဆိုတာကို ပုံလေးတွေနဲ့ ပြပေးထားပါတယ် ..သေခြာ သဘောပေါက်နားလည် လိမ့်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်. သည်နည်းလမ်းလေးဟာ ကွန်ပျူတာ သမားတွေအတွက် အျွှန်တကယ်လိုအပ်မယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်မိလို့ အရင်က နေမင်းမောင်(နည်းပညာ) ရေးသားထားတဲ့ နည်းလမ်းလေးကို ကျွန်တော် သိမ်းဆည်းထား ပါတယ်. ခုတော့ အများအတွက် အသုံးဝင်စေဖို့ ပြန်လည်ကာ တင်ပြ မျှဝေလိုက်ပါတယ်ဗျာ....။
အရင်ဆုံး Keyboard မှ Windows + R ကို နှိပ်ပြီး Run Box ကိုဖွင့်လိုက်ပါ .. ပြီးရင် Run Box ထဲမှာ regedit လို့ရိုက်ထည့်ပြီး OK ပေးလိုက်ပါ .. ဒါဆိုရင် Registry Editor ပွင့်လာပါလိမ့်မယ် ပြီးရင် ‘HKEY_LOCAL_MACHINE \_ SYSTEM \_ CurrentControlSet \_Control \_ usbstor ထိအဆင့်ဆင့်သွားပြီး usbstor ကိုရောက်ပြီ ဆိုရင် 05AC12xx ကိုကလစ်လိုက်ပါ .. ပြီးရင် Edit ကိုသွားလိုက်ပါ .. ပြီးရင် ဆက်လုပ်ရမယ့် အဆင့်လေးတွေကိုတော့ အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ ပြပေးထားပါတယ် ..
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ USB Drive ကို Transfer value မြှင့်ပြီး အလွယ်တကူ အသုံးပြုတက် သွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ..
From_Nayminmaung မှပြန်လည် မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်.
Ye Naing at 4:11:00 PM 0